Muuse biixi mantuu ciindaaqay.
Tuesday September 08, 2020 - 20:46:21 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Asalaama aliukum waxan salamayaa akhristayasha sharafta iyo qimaha leh ee mareegaha somaliland ku xidhan.
Watii sayidkii loogu gabyeyey,"
Kakicii wadadki dagal laguna kalmeeye, kumaanaan dubcas bu kenay berdhiga waxase kadib goay malinkuu kaday ragisii".
Waxay kaloo somalidu tirahda awrooy daqday daqday e malinkad cindaqda lagu yabaa.
Maxamud hashi cabdi oo ah halyeey usoo tagna jamhurida barakaysan wayo badan, kana mid ahaa dhalinyaradii jabhadi Snm, marna ahaa gudomiyihi degmada doqoshay e jabhadi xaqudirirka la dagalamasay kaligi taliskii siyad baree, ahaana isago 33 ah gudomiyihi qabanqabiyey shirki 19991 lagu dhisay jamhuriyada somaliland oo la oga qaybti muga lahayd ee u qatay shirkas iyo qabashadiisa, wixii kadanbeyey uu ka mid ahaa barlamankii ugu horeeyey e somaliland yelato.
ilaa ugu danbayn uu xisbiga kulmiye la aasasay rugcadagii iyo hogamiyihii fekerka dhera rabi cimriga iyo cafimadka haw dhereyee, madaxweynihi hore ee somaliland mudane ahmed maxamed maxamud silanyo, kadib halgan dheeer u galay sidii xisbiga kulmiye iyo isbedel wadankena u uga dhici laha ilahay u ku guleyey 2010.
markaas o lo magacabay wasiir kii dulista iyo hawada, xilkas oo u hayey ilaa 2014, isagoo,hawlo waweyn ka qabtay Airport ka cigaal airport e magalada hargaysa iyo garonka diyaradaha ee berbera oo markhati fur aya u tahay quruxda iyo nidamka usameeyey airporka cigaal iyadoo owel hore dameraha iyo adhigu ku xeroyn jireen.
Dadka wax ma garato ah oo shilimad iyo xilal ka wayey maxamud hashi aya suqa u geliyeen inuu dhacay lacagtii Airport ka ama uu ku kacay xatooyo laxacaged taas ilaa hada ah kutiri kuteeyn moyee aan wax cadayna cid uhaysaa aaysan jirin.
Isago marki danbena lo magacabay wasirki madaxtoyada somaliland isago halkas hawshisi qaranka kasi waatay, maxamud hashi wuxuu aha ragii ka midho dhaliyey in dekeda berbera lagu wareejiyo DP world oo wakhtiga ay wax magaratada iyo cadowga dalkan barakaysan ee xukamadi silanyo dhaliil uga dhigayeen in uu ay wadanka wada ibisay o badankoda qar qabilaysan iyo qaar an garanayn waqiciga calami ee malgishaga e lagu so kasbado shirkad calamiya.
DP world project waxay inoo ibo furtay manta in ay shirkado hamaha shidalka bebera inagu so dhiradan iyo Dp world o noqotay guul qaranka ilaha uso hoyatay oo ay ka qusten cayankii villla somalia iyo farmajo oo wacad ku maray inay is hortgaaan horumarka somaliland.
Hadaba maxamud hashi abdi o lagu ogaaa ama lagu ogyahay ilaa malinkuu uu hana qaaday in uu qarankisa uu udhamiyo isagoo 5 sanno moyane an melkale aadin. Waxaa hadaba ayandaro ah in manta shurunshurka uu ka mid yahay xildhiban bukhari oo ku canbaxay dabadhilifnimo, kitaab xornimo uu ugu hanjabo maxamud in la xidho ama u jawaabo, waxanu lenahay kuwa xildhiban bukhari iyo qar la fekerka ah maxamud hashi nin sida aad ugu dhiran kartan maaha.
meel gidiin adag ayuu kasoo jedaa, hadii cid xatooyo lagu shegayo, muuse bixi baa balodhadi masakintu ka baxsan weyday iyo bertii cisman dacas ala yaa raxma.
waxa inta dheer gobanimada iyo karamada maxamud hashi waxa ka mid ah wagii olalaha dorashada wuxuu aha isagoo u rabbi haw naxariste general cisman dacas o marna aha taliyaha cidamada somaliland uuu madaxweynaha qaranka oo an weli xushmad u ahayo, ahana dhalinyardi weligood tagersana u xoog kaga haysto.
in agonti ilma general cisman dacas uu maxamud hashi uu wagi dorashada wejisa ku hakiyey dacwadii ku socotay madaxweyne ah oo sumcad daro iyo in codad yar u ka helo gobolka sarar oo maxamuud hashi iyo generalkuba kaso wado jedaan.
Waxanu lenahay madaxweyne, dhaldhalka waakugu hodaa dhobo maxsiniye.
maxamud haashi cabdi wa siyasiga ugu tagerdaa iyo sumcada badan, siyasiynta besha degta waqoyiga berbera, bariga burco iyo galbed ka sanaag. Guntii iyo Gegabadii sida u siyasi maxamud shegay 3 sanno banu amusnayn oo afka gacanta saarnay madaxweyne manu baqayn ee waxay inta naga ahayd tudhaale iyo qiimo iyo qadarin aanu u hayno dalyaga iyo madaxisa balse hadii lakala xishon wayey oo waxba laysu xeerin wayey toos baa laysula hadli inshaAllah.
Somaliland ha jirto, hana gulaysto.